Waraanni Eertiraa Godina Booranaa; Eritrean Military in Borana, Oromia – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooWaraanni Eertiraa Godina Booranaa; Eritrean Military in Borana, Oromia
Waraanni Eertiraa Godina Booranaa; Eritrean Military in Borana, Oromia
Waraanni Eertiraa Godina Booranaa Aanota 3 keessatti Jiratatota irraan miidhaa qaqqabsiisaa jiraachuu SQ odeeffate.
[SQ-Waxabajji 6/2021], June 5, 2021
Akka jiraattotni yaada Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof himanitti Waraanni Eertiraa fi RIB dheeda Booranaa Liibaniitti ummata hiraarsa jiraachuunuuf himaniiru.
Godina Booranaa Liiban aanaa Liiban, Gumii Eeldalloofi magaalaa Nageellee Booranaatti waraanni Eertiraafi RIB waxabajji 4/2021 ganama Elekoptoraan dhufanii , Booranaa Liiban weeraraa jira.achuu kan nuuf himan jiraattotni Uffata RIB uffatanii afaan Oromoo hin beekan ,Amaariffas nama tokko tokkotu keessaa jecha tokko dandaha kan jedhan jiraattotni aanaa Liiban yeroo ammaa kana hawaasaa horsiisee bultoota dabalatee Ummata hiraarsaa jiru jedhaniiru.
Waraanni Ertrea kunneen calqaba Helekoptaraan Aanaa Liiban haa qubatan malee yeroo ammaas aanaa Gumii Eldelloo fi bulchinsa Magaalaa Nagellee keessas socho’aa ummata dararaa akka jiran jiraattotni SQtti himaniiru.
Akka jiraattotni jedhanitti waraanni Ertrea kunneen bilbila harkaa nama qabanii irraa saama akan jiranii fi qarshii irraa fudhachaa akka jiran nuuf himaniiru.
Torban dabarsaa jirru kan akeessa waraanni Ertrea Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Abbaay Coomman keessatti ummata irratti saamicha afi reebicha aggeessaa jiraachuu SQ dabalatee BBC Afaan Oromoon jiraattota naannoo wabeeffachuun gabaasuun ni yaadatama
Shira Oromummaan Daboolamee Harcaatoota OPDOn ergama Diinaa Dhugoomsuuf Carraaqaa Jiran, Uummanni Oromoo Godina Booranaa Dura Dhaabbachuu Qaba.
Waxabajjii 05, 2021
Uummata Oromoo Godina Booranaa Harcaatooti OPDO Uummatii Oromoo hacuuccaa Mootummaa Habashootaa dabaree dabareen itti wal faraqan ofirraa fonqolchuuf QBO Ganna 47 geggeeseen Uummatii Oromoo lubbuu Qabsaa’ota hedduu, ilmaan isaa itti wareegee Dhiigaa fi Lafee ilmaan isaatiin Ganna 3n dura jijjiirama dhalche. Harcaatooti OPDO kaleessaa Yakki Sanyii Duguuggii Oromoo irratti raawwataa turan Uummata Oromoo jala micciiramanii fakkeessuun Aangootti dhufanii Qabsoo kaleessa Uummatii Oromoo kumaatamaan ilmee isaa itti dhabe Shira gara dabsuu raawwatanii Gannootii lameen dabran eenyufilleef ragaadha.
Maqaa Oromummaatiin kakataa, maqaa ilmaan Abbaa Gadaatiin Oromoo gowwoomsaa Sirna Moofaa Oromoon diiguuf ilmee itti wareege hardha deebisuuf, lafa Oromoon Dhiigaan tiksee asiin gahe Soomaleef gurguruuf Marii Kilaasteraa Hoggaansi ol-aanaan OPDO Fi Soomalee irratti argame kan Yaa’aballootti taa’ame irratti Daboo walii ba’uuf murattee kaate. Gochaa Sanyii Duguuggii OPDOn raawwachaa jirtu Oromoon hin agarre hardha hin jiru; garuu, Uummata Oromoo Godina Booranaa kaleessa wareegama guddaa namaaf Qabeenyaan itti baasee ‘Qabsoo Bilisummaa Oromoo’ Uummata dandamachiisee hardhaan gaheedha. Haata’uutii, Harcaatooti OPDO Godina Booranaa, Harcaatoota OPDO Oromoota Naannoo biroo irraa Uummata Booranaa Aadaa fi Sirna Gadaa, Daangaa Oromiyaa fi Qabsoo Bilisummaa Oromoo dandamachiisuun Oromootaan gahan, Seenaa Angafummaa isaatiin Oromoo badii irraa dandamachiisee qooda olaanaa Uummata wareegama guddaa itti baase, kana maleesi, Lola Siyaasaa maqaa Daangaatiin itti baname qolachuuf Wareegama Seenaa keessatti qooda olaanaa qabu Uummata galmeesse, Harcaatooti OPDO hardha Godina Booranaa dirqama PP ilmaan Nafxanyaa Sirna Moofaa dandamachiisuu fe’amtee maqaa Borantittiitiin ukkaamsitee, Seenaa Uummata Oromoo Booranaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti galmeesse busheessuu Fi Lafa Uummanni keenya Dhiigaaf Lafeen tikfatee hardhaan gahe Soomaleef kennuu irratti argamti. Shira Uummata keenya addatti Oromoota Booranaa maqaa Oromtittiin daboolani Irree OPDOn ukkaamsaa jirtuun cabsee keessaa bahuu qaba.
Keessattuu yeroo ammaa kana maqaa Boorantittiin of daboolanii Shira dhokataa ergama ilmaan Nafxanyootaa bakkaan gahuuf, Godina Booranaa irra dabranii Oromoota Liibaniitti duulaa jiran. Diinummaa isaanii kan ifa baase gochaan isaanii kan maqeefatan ‘WBO maaliif Uummata qulqulluu ajjeesan?’ Boorannii Dirree kana tokko jedhi; Lafa kaleessa Soomaleen Boorana Liiban irraa buqqifte, kan WBOn Diina lolee deebiseef; Alooyye, Odaa Diimaa, Waleenso, Qaxxee Waaree, Qaxxee Harboruu fi Dhungoon guyyaa hardhaa ergamtootii maqaa Booranaatiin daldaltu OPDOn Liyyuu Hayilii Soomalee waayila tolfattee guyyaa kaleessaa galgala Liyyuu Hayiliin Soomalee Fiiltuuf Dheekkaa irraa bobbaatee ganama barraaqa irraa kaasee Alooyyee fi Odaa Diimaa seenee lolaa jira.
Kanaaf Uummatii Oromoo Godina Booranaa ergamtooti maqaa Booranaa golgachuun dirqama Halagaa shiraan dabooluun kana bakkaan gahuuf gocha raawwachaa jiran kana dura dhaabbachuun dirqama Fardii yeroon isan irraa eegdu ta’uu hubachuun Boorana Liibanii Fi Lafaaf Lafee isaa damdamachiisuu fi Seenaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti Uummatii Oromoo Godina Booranaa qabaachaa ture xureessuuf deeman kana goggossuu qaba. Hatattamaan wal dhageessisuun walii birmachuu qaba. Boorana warra Areeroo “Maaliif wannii kun ta’e?” jedhanii mormii dhiyeessan guyyaa hardhaa Areerootti nama 150 ukkaamsuun hidhanii jiru. Bakka cufaa Murtii keessan dhageessisuun kabajaa Wareegamtoota ilmaan Oromoo Qabsoo Bilisummaa Oromoof kitiman deebisuun dirqama.
Keessattuu Qeerroo fi Qarreen Godina Booranaatiif kun ergaa jalqabaaf isa dhumaati.
Qophii Raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa Waxabajjii 5, 2021